Ekwuputara Epic Games of Psyonix Games | Site na Linux
Epic Games, onye mbipụta egwuregwu ama ama Fornite, kwuputara mbinye aka na nso nso a a "ikpeazụ nkwekọrịta" na-akàrà nnweta nke ụlọ egwuregwu mmepe onwe ha Psyonix, nke dabeere na San Diego, na ndị ọrụ ya 132.
Maka ndị na-amaghị Psyonix, ị kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ụlọ egwuregwu na-eme egwuregwu vidio nke mepụtara egwuregwu bọọlụ a ma ama "Rocket League", yana Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars na Monster Madness: Ili Ọdachi na 2008, wee gaa n'ihu na ọrụ ndị ọzọ gụnyere ọrụ nkwekọrịta maka ọtụtụ nnukwu aha mmefu ego.
Egwuregwu Epic na Psyonix nwere mmekọrịta dị ogologo, malitere kemgbe mmalite nke Psyonix na 2001 na Raleigh, North Carolina, na-adịghị anya site n'isi ụlọ ọrụ Epic.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Epic sooro Psyonix rụọ ọrụ iji meziwanye ngwa ọrụ ya na-adịghị agbanwe agbanwe na ngwa ọrụ Psyonix. Ọ bụ ihe dị mkpa n'ime okike nke egwuregwu vidio dabere na Eziokwu na-adịghị adị dị ka asọmpi na-ezighi ezi 2004, Gears of War, Bulletstorm or Mass Effect 3.
"Psyonix abụwo akụkụ nke ezinụlọ Epic mgbe niile, anyị nwere obi ụtọ ịme ya," ka Tim Sweeney, Epic CEO kwuru, na-agbakwụnye, "Anyị nwere nnukwu nsọpụrụ maka otu Psyonix siri wuo nnukwu ndị otu na obodo dị egwu gburugburu Rocket League . "
Na 2015, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara Rocket League, mmalite nke egwuregwu Supersonic Acrobatic nke afọ 2008, bụ nke zuru ụwa ọnụ. Egwuregwu a ugbu a nwere ihe karịrị nde 57 ndebanye aha ma rere ọtụtụ nde.
Ọzọkwa aburula onye an esport (egwuregwu kọmputa) ewu ewu, ya na usoro ya na egwuregwu na agbasa ozi n'ikuku na telivishọn na usoro ntanetị.
Ọzọkwa ekwesiri ighota na Psyonix na Epic Games so n’etiti ndị nkwusa egwuregwu ole na ole ịga rịọrọ Sony ka ọ kwụsị iwu ya nke igbochi ịnyefe akaụntụ na igwu egwu egwuregwu n'etiti PS4 na consoles na-asọmpi.
Ndị Japan mechara chegharịa na Psyonix wetara nkwado cross-platform for Rocket League na PS4 na Jenụwarị nke afọ a.
N'iso nkwekọrịta a, Psyonix ekwupụtala na ọ ga-enwekwu akụrụngwa iji kwado ọgbakọ egwuregwu nke Rocket League. na a ga-ebufe ụdị PC nke Rocket League na Epic play store na mbubreyo 2019.
Mgbe ụbọchị a gasịrị, Njikọ Rocket nwere ike ọ gaghịzi adị na ụlọ ahịa asọmpi Valve, ọ bụ ezie na ndị na-azụ Steam mbipute nke egwuregwu ahụ nwere ike ịga n'ihu na-egwu akwụkwọ ha dị adị na-akaghị aka ma nata nkwado, ọdịnaya na - ebudata, patches na ndị ọzọ.
Pslọ ọrụ Psyonix kwenyesiri ike na ọ ga-aga n'ihu na-ere ma na-akwado Rocket Njikọ na nyiwe ndị ọzọ, gụnyere PlayStation, Xbox na Switch.
Dị ka Psyonix si kwuo na post blog, "na obere oge, ọ dịghị ihe ga-agbanwe."
Ọmụmụ ihe ahụ na-ekwu site n'aka onye guzobere Dave Hagewood:
“Anyị na Epic na-arụkọ ọrụ anya kemgbe mbido asọmpi na-ezighi ezi, anyị lanarịrị oge nke ebili mmiri dịka ndị mmekọ. Nchikota nke ike agha mere ezi uche.
Ihe nnweta Psyonix bụ Epic kachasị ike iwe, nke juputara na ego ma ogwugwu di uku nke Fortnite.
Kemgbe mmalite nke iclọ Ahịa Epic na njedebe nke 2018, usoro ikpo okwu nke na-ekwe ndị mmepe 88% nke ego ha nwetara site n'ire egwuregwu ha, ụlọ ọrụ ahụ arụ ọrụ ịzụta ọtụtụ ọpụrụiche dị iche iche iji gbasaa katalọgụ nke nyiwe ya enye egwuregwu n'efu n'izu abụọ ọ bụla iji dọta ndị ahịa.
Anyị kwenyere n'ezie na ọdịnihu anyị n'egwuregwu na-atọ ụtọ, ọkachasị n'ọdịnihu dị nso, ebe June 21 na 23 nọ na Prudential Center dị na Newark, NJ, nke ikpeazụ nke Rocket League Championship Series (RLCS)
Epic na-aga n'ihu na-emefu ego buru ibu iji mebie iwu Valve na nkesa egwuregwu PC.
A na-atụ anya inweta nnweta a n'ọnwa ma ọ bụ ọzọ. ọnwa na-echere nkwado iwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » A mara ọkwa Epic Games of Psyonix Games
DuckDuckGo na-atụ aro Iwu Dora-Track